Kenya Sy Ny Fitsapankevibahoaka Mikasika ny Lalàm-panorenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2018 7:47 GMT
Miroso amin'ny fifidianana anio 21 Novambra 2005 ireo Keniàna, fifidianana fitsapankevibahoaka momba ilay volavolan-dalànan'ny lalàm-panorenana izay nampizarazara be ny firenena. Ny Filoha Mwai Kibaki no nitarika ilay fampielezankevitra ho an'ny “eny”, izay naseho tamin'ny endrika akondro, ary ny fampielezankevitra “Tsia”, tamin'ny endrika voasary, izay ahitàna mpikambana maro, anisan'izany i Raila Odinga, Minisitry ny Làlana. Andrasana hivoaka ny 23 Novambra ny valim-pifidianana; hihatra manomboka ny 12 Desambra, andron'ny fahaleovantenan'i Kenià kosa ilay lalàna raha toa ka mandresy ny “Eny”.
Raha fintinina, manolo-kevitra ny hanomezana fahefana bebe kokoa ho an'ny fitondràna ilay volavolan-dalàna, io no tena fototry ny fifandirana ho an'ireo mpanohana ny voasary, izay manome vàhana ny tokony hisian'ny lalàm-panorenana misy fifampizarana ny fahefana mpanatanteraka eo amin'ny filoha sy ny praiministra. Raha toa ny fampielezankevitry ny Eny sy ny Tsia ka nifototra tamin'io resaka io, nirona tany aminà hevitra vaovao kosa ny sain'ny maro, toy ny fitakiana fanovàna ifotony mihitsy ny fananantany, ny fandraràna ny fanavakavahana mifototra amin'ny maha lahy na vavy sy ireo fanavakavahana maro hafa ary ny fampidirana andinin-dalàna mirona amin'ny hetsika mahasoa.
Nandritry ny fampielezankevitra, nifampiampanga ny andaniny sy ny ankilany hoe manao fampielezankevitra maloto amin'ny lafiny maro, lasa ambony ambany noho izany ilay hetsika, indrindra koa ny fipoahan'ny raharaha tamin'ny nilazàn'ny filoha Kibabi fa “Wapumbavu” (olona tsy misy saina) ary “Mavi ya kuku” (tain'akoho) ireo mpanohitra. Hatreto, olona maro no efa namoy ny ainy tanatin'ireo fifandonana mahery vaika talohan'ilay fitsapankevibahoaka. Nambaran'ilay manampahaizana, Wangari Maathai, fa “Fitaka” ilay fitsapankevibahoaka ka nilaza izy fa tsy hifidy na ny andaniny na ny ankilany. Satria ilay lalana tokony hanamafy ny demokrasia no toa lasa hazakazaka ho amin'ny tombontsoa politika fa tsy adihevitra mikasika ireo resaka saropady ao amin'ilay tondrozotra akory».
Ny faran'ny herinandro nialohan'ilay fitsapankevibahoaka, hitanareo etsy ambany ny fintina lohatenim-baovao sy ny fanehoankevitra tao amin'ireo gazety keniàna mpivoaka isanandro.
Raha tokony ho fifanankalozan-kevitra manorina, lasa nirona tamin'ny fampisehoana ‘fifaninanana tsanganolona sy fandaharanasa hafa’ ny adihevitra manodidina ilay lalam-panorenana, hoy ny fanehoankevitr'i Gitau Warigi tao amin'ny Sunday Nation (mitaky fisoratana anarana). Ny dingana narahina nitondra tany amin'ny fitsapankevibahoaka no nampiseho miharihary ’ny tarehy ratsy sy mampitahotry ny Kenya izay miafina ao ambany zavatra hita’ noho ny ‘hatezerana mahatsiravina miafina ao ambadiky ny lokon'ny demokrasia sy ny fahalalahana hiteny’.
Tao amin'ny The East African Standard, nitatitra ireo tranga ara-tantara nahatonga ny filàna ny fanavaozana lalàna i Chaacha Mwita ka nanambara fa ’firenena ahiana hiparitaka’ i Kenya raha toa ny fifidianana rahampitso ka tsy ‘hialohavan'ny rariny sy ny fahamarinana ao amin'ilay tranom-pifidianana’
Araky ny nolazain'ny Kenya Times, “ny valim-pifidianana ” no tokony ho mariky ny fahefana faratampon’ [ny vahoaka] hanoritana ny lalana hizoran'ny firenena’ ary na ho Eny na ho Tsia , ‘tokony hajain'ny roa tonta mpifanandrina’ izay ho valiny eo.
Mikasika ilay volavolan-dalàna sy ilay fitsapankevibahoaka, manan-kambara be ireo Keniàna blaogera .
Tao amin'ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Voafitakao indray mandeha aho, henatra ho anao . Voafitakao fanindroany aho, henatra ho ahy, no nanambaràny fa zava-dehibe eo amin'ny fizorana any amin'ny demokrasia ny fifidianana, Mentalacrobatics moa dia mandrisika ny Keniàna hametraka fanontaniana vitsivitsy manan-danja sy tena ilaina momba ny tenan'izy ireo ihany sy ireo politisiana alohan'ny hifidianana, toy ny hoe ‘Moa ve ny olona mandray anjara amin'io fitsapankevitra io manao izany ho an'ny vahoaka Keniàna’ satria tsapany fa mihavery ny “politika mivelatra sy midadasika kokoa”
Ny Keguro dia namorona teny vaovao – hetero-theocracy – izay midika hoe ‘mamantatra ny fifangaroana sy ny fahasamihafana mba ahafahana mamaha olana amin'ny alàlan'ny fizokiana tsy refesimandidy ary mitsipaka ilay fehezandalàna manokana ao anatin'ilay drafitry ny lalàm-panorenana manao ho laharam-pahamehana ny kristianisma sy ny fiarahan'ny olon-droa vavy sy lahy, kanefa miseho ho ’manohana sy mampiroborobo ny fahasamihafan'ny kolontsaina sy ny foko “.
Nilaza i Tony Sisule fa tsy mba naka sy nahazo ny fanekena avy amin'ny vahoaka Keniàna akory ny governemanta, fa dia nametraka an-tery volavolan-dalàm-panorenana ho an'ireo Keniàna fotsiny izay ‘vokatra tsy ara-drariny novolavolain'olom-bitsy mba hampiasain'zy ireo amin'ny tombontsoany manokana fa tsy ho an'ny soa iombonana’. Mamporisika ny Keniàna izy hifidy ny Tsia.
Namoaka sary mahaliana momba ny fizotran'ilay fitsapankevibahoaka i Kenyan Pundit
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy tao amin'ny Gikuyu i Gatua wa Mbugwa, handavana ny tsaho milaza hoe kasain'ny governemanta Keniàna ny hanafoana ilay fitsapankevibahoaka mba hisorohana ny faharesena, tamin'ny filazàny fa nambaran'ny filoha Kibaki mazava fa tiany ny hizoran'ilay fitsapankevibahoaka. Gatua kosa mandrisika mafy ireo Keniàna hamaky tsara ilay volavolan-dalàm-panorenana ary hifidy araka ny ‘feon'ny fieritreretany sy ny fomba fijeriny azy hoe mety ve’.
Tamin'ny fanoratany fa tokony tsy ’hiresaka politika’ ao amin'ny bilaoginy izy, nilaza i Lois fa nifidy ny Eny ary manantena fa ‘ hifidy am-pisainana ny vahoaka Keniàna ka hifidy ny Eny’.
Lazain'i Migz fa lasa resaka politika loatra ilay fitsapankevibahoaka ka manana fanahiana ihany izy ‘raha toa hifidy miainga avy amin'izay heverin'izy ireo fa fanapahankevitra mazava manodidina ilay lalàm-panorenanany ny ankamaroan'ireo Keniàna ’. Nahita ny lafiny mampihomehy amin'ilay dingana izy ary nitantara vazivazy mombana lehilahy iray izay ‘naniry akondro kanefa voasary no hita tao amin'ilay fangarom-boankazony’.
Tamin'ny filazany fa hifidy izy amin'ilay fitsapankevibahoaka, gaga ny One African Woman ny amin'ny halaviran'ny làlana vitan'ny Keniàna ‘amin'ny maha firenena azy, ny haben'ny sehatra demaokratika amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny taloha’ ary mankalaza ‘ny fahatsapantenan'ireo Keniàna handray anjara mihoatra noho ny taloha amin'ny famaritana ny hoaviny’.
Noarahabain'ny JKE ny National Commission on Human Rights (KNCHR) na ny kaomisiona Keniàna momba ny zon'olombelona tamin'ny nananganany ‘lisitry ny henatra’ ahitana ny anaran'ireo mpanao politika 40 izay “nanao kabary fanavakavahana miorina amin'ny fijery ara-pomba sy ara-poko“, feno famporisihana herisetra nandritra ny fampielezankevitra ary mahatsapa fa “misy elanelana be eo amin'ireo mpifidy sy ireo solontena ho fidiana”.
Satria izay rehetra fanitsiana na ny fanavaozana ny lalàm-panorenana dia mitaky adihevitra lava reny sy fanangonantsonia iray tapitrisa raha lany eo, ‘ireo mpisolovava elitista, ireo mpikatroka ara-tsosialy, ireo Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana vatsian'ny any ivelany vola, ireo profesora manana ny famirapiratany, ireo mpanao sesitany ny tenany ara-politika, ireo mpikirakira nanamboatra ny lalàm-panorenana dia nahita fomba iray ahazoana vola hoy Orwells_Ghost. Ny heviny dia ny hoe ‘ireo mpandoa hetra ao Kenya no hamatsy ny adin'izy ireo izay tsy manam-pahataperana’.
Ho fanaingoana ny fomba nampisarahan'ilay fitsapankevibahoaka ny Keniàna tamin'ny alalan'ny masontsivana ara-poko, nanoratra momba ny fitsidihany vao haingana tao aminà sehatra Keniàna iray fifampiresahana anaty aterineto i Kibara izay nanafintohina azy tamin'ny fahitàny ireo olona heveriny ho namana nefa nilaza ny tokony ‘handripahana ireo Kikuyus rehetra’ noho ny filazàna an-dry zareo ho manohana ny fanentanana “Eny” ary ankehitriny manolotra fomba vaovao hamahana ny olana ara-poko .